Virosy navaozina tamin'ny sarivongana fitaratra nataon'i Luke Jerram | Famoronana an-tserasera
Microbiology amin'ny sary sokitra fitaratra nataon'i Luke Jerram
Luke Jerram dia mpanakanto maro karazana izay tafiditra amin'ny famoronana sary sokitra, karazana fametrahana sy fampisehoana rehetra. Ny tanjona lehibe ananan'ity mpanakanto ity dia ny famoronana tetikasa zavakanto manaitaitra sy mitaona ny olona erak'izao tontolo izao.
"Glass Microbiology" dia iray amin'ireo tetikasany mahaliana sy manaitra indrindra izay manaparitaka viriosy sy otrikaretina fantatry ny rehetra. Ny hevitr'ireto sary sokitra ireto dia ny fitondrana ny mpijery solontenan'ny viriosy hafa izay tsy misy loko ary kely kokoa noho ny halavan'ny hazavana.
Tetikasa kanto iray izay tsy mamela olona tsy miraika ho an'ny fisehoana amin'ny tsirairay amin'ireo sary sokitra ny sasany amin'ireo pathogens mahafaty indrindra ary ny sary nalaina tamin'ny sasany tamin'izy ireo dia ampiasain'ny magazine siantifika na boky fianarana ankehitriny.
Zavakanto avo lenta izay misy finiavana hendry aseho ireo singa madinidinika ireo izay tompon'andraikitra amin'ny fitondrana aretina manerana ny planeta. Fanehoana kristaly mahery izay mety hiteraka karazana fahatsapana rehetra ary amin'ny endriny lehibe dia ahitantsika ny fahalemem-panahy azon'ny tsirairay amin'izy ireo amin'ny endrika voajanahary.
Tsirairay amin'ireo sary sokitra ireo toa biby fa ny fanaintainana ateraky ny olombelona dia mihoatra ny "fahalalany". Ny fitaratry ny tenantsika toa ny tenantsika toy ny karazan'aretina amin'ny tany raha mitady karazana dikany amin'ny asa ampitain'i Jerram amintsika.
Manana ny tranokalan'i Luke Jerram ianao avy amin'ity rohy ity, izay ahitanao ireo tetik'asa mahaliana hafa izay azonao atao tandremo ny fampirantiany sasany. Mpanakanto iray izay manandrana mandrangitra ary, araka ny filazany ihany, hampientanentana ny tetikasany, na dia misy aza ny tsy mahalala fomba toa ireny sary sokitra fitaratra ireny.
Carol milne mitondra antsika amin'ny làlana hafa mampiasa ny kristaly.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Microbiology amin'ny sary sokitra fitaratra nataon'i Luke Jerram
Ny fanovana rano dia mitete ho zavakanto
Hayao Miyazaki, iray amin'ireo kilalao saribakoly lasa 75 taona